Madax qalaad mase madax qaran?! | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Dadka dunidan dulsaaran waxaa lagu kala soocaa af iyo addin, micnaha waxaa lagu kala saaraa dhawaq iyo dhudhun, haddaan si kale u dhaho, waxaa lagu kala duwaa dibna hadal iyo duud heeryo, dabcan,deegaan dayran iyo dabeecad duummanna ha daleel marin, xeer beegti, xukun dhigan, xeyndaab xiran iyo xuduud xeeranna xaf ha uga gudbin.
Soomaalida waxaa lagu tiriyaa, umudaha dunida korkeeda ku nool kuwooda ugu afka hodonsan, dabcan, Anigu isuma marqaati kicine, waxaa marag furay afleyda umadaha kale,qiimayn badan, qotomin fog iyo qiyaas dheer ka dib, illeenusha saar, isha mari iyo afka ka sheeg kuma imaane, malahayga Carabiga ayaa naga horreeya ma ahane, afafka kale, waa hore ayaan luxudka ku soo ogaannay.
Midawgii labada gobal ee Waqooyi iyo Koofur ka dib, iyo curashadii Jamhuuriyadda Dimoqoraadiga Soomaaliya, waxaa maamulkii dalka hoggaanka u qabtay laba af gumaysi, waa Ingiriis iyo Talyaaniye, dabcan, Carabigana ha dhaafin, oo marti aan la moogayn ahaa. Sidaa waxaa ugu wacnaa af soomaaliga oon qornayn! Ku hadlid iyo hawraar isku dhihid waa lahaa, haba jiraan dhawaq guri, dhihid degmo iyodhaajin tuulee.
Waxaase la isla keeni waayey afka la adeegsanayo, illeen aqoonyahan kasta ama maamule kasta af gaara ayuu soo bartaye, Intii Waqooyiga ka timid nin walba wuxuu adeegsan jiray Ingriiska, halka inta Koorfurtajoogtayna ay adeegsan jireen Talyaaniga, oo ah dabcan, labadii dawladeed oo kala gumaysatay labada gobal, Carabigu wuxuu u ahaa dhextaal, laga yaabee qofku inuu yaqaanno iyo inuusan aqoon, sidaa ayuu ku ahaa “Barbarre” micnaha aan dhanna hayn.
Dhibka jira ayaa se ah, in marka aad dhagaysato muxaadaro wadaad, aadan kala garanyn wadaadkani ma Soomaali ayuu wax u sheegayaa? Mise Carab la Soomaaliyeeyey? Eraga ah Carab la Soomaaliyeeyeyula kac iyo ujeed ayaan u adeegsaday, inaan muujiyo qabweyniada Qawmiyadda Soomaaliyeed, oo aan sheedda dhigo sheeko khiyaaleedka meelaha lala shuushuu leeyahay, ee ah Soomaali ayaa Carab ah, ama Carabowday!
Hubaal inta dad madax loogu noqdaa in afku ugu horreeyo, micnaha haddii aadan af ku haqab tiri karin, eray ku baahi bi’in karin, Wallee madaxnimadaa waa mid ba’day, iyadoo la kala afaf duwan yahay ayaa haddana la is hogaamiyaa, oo markaa waxaa jirta mid wadaag ah oo dadka dhan ka dhaxaysa, ayna wada yaqaannin, waan filaa inay tusaale ku filan tahay Kenyada dariska nala ah, marka laga soo tagoKiswahiliga, afka koowaadi waa Ingriis, oo ah afka la isku wado garto.
Sayladda Cod-gadashada Soomaaliya “Waxaan Heshiis Iskaashi kala Sixiixaney Wasiirka Warfaafinta Dalka Jabuuti…”